Hlola iTeotihuacan, Mexico - World Tourism Portal
Hlola iTeotihuacan, eMexico
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili eTeotihuacan, eMexico
Okufanele ukwenze eTeotihuacan, eMexico
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeTeotihuacan
Bukela ividiyo ekhuluma ngeTeotihuacan
Hlola iTeotihuacan eyaziwa nangokuthi Idolobha Lezikhulukazi, indawo yakudala 40 km enyakatho mpumalanga ye Mexico City. INáhuatl “yendawo lapho abantu baba ngonkulunkulu khona”, iTeotihuacán iyikhaya leminye imibhoshongo yasendulo enkulu kunayo yonke emhlabeni. Ngokwenganekwane, kulapha lapho onkulunkulu bahlangana khona ukuhlela ukudalwa komuntu.
ITeotihuacán yayiyidolobha elikhulu kunangaphambili le-Columbian eMelika, ifinyelela inani labantu base150,000 ekuphakameni kwayo. Leli gama libuye lisho nempucuko leli dolobha elalibuswa ngalo, elalihlanganisa kakhulu iMesoamerica kakhulu.
Ukwakhiwa kweTeotihuacán kwaqala ngase-300 BC, ngePyramid yeLanga eyakhiwe yi-150 BC. I-150-450 AD.
Iningi lezinto zakudala ezivela esizeni zihanjiswe ngokuqonda eNational Anthropological Museum, eMexico City. Ukuphakama: 2,300m.
Kunemali yokungena epaki (imnyuziyamu ifakiwe). Lesi yisiza esikhulu, ukuhamba okuningi kuyadingeka njengoba kunezindlela ezimbalwa zokuhamba kule ndawo, ngaphandle kokuthi unemoto, lapho-ke ungashayela ngokukhululeka uzungeze umjikelezo (uma uhlala ehhotela epaki noma ulibangise enye yezindawo zokudlela eziningi). Kukhona izinqola ezidonswa ngogandaganda nezihlalo nendawo yokukhosela ezihamba ngohlelo ezaziwa yizo kuphela. Uma uhamba ngebhasi, zizokuhambisa endaweni yokudonsa, lapho uyodingeka ukuthi uhambe ngayo. Uma ukhathala kalula, faka ukukhanya kwalolu hambo.
Qaphela ukuthi isiza simahla kubahlali Mexico ngamaSonto, ngakho-ke ungafuna ukuvakashela ngolunye usuku. NgoLwezibili nangoLwezithathu kuvame kakhulu ukuthi kube izinsuku ezihamba kancane ngesonto.
Kunabaqondisi abanamalayisense abakhuluma isiNgisi ngemuva kokuthi ubanikeze ithikithi lakho lokungena. Lolu hambo lunokuqonda ngokwengeziwe njengoba bekhuluma ngemininingwane ethile yeThempeli leNyoka ongeke wayiphonsa uma ungaya ngqo ethempelini leLanga neNyanga.
Kunenqwaba yamaphoyisa epaki anobungane lapho nawo alawula ukuhamba kwezimoto. Abashayeli bamatekisi abavunyelwe ukukushayela kuzungeze isayithi, ngaphandle kokuthi unendawo oya kuyo, njengendawo yokudlela, ngaphakathi kwepaki. Uma unobuhlakani futhi unenhlanhla, ungakwazi ukuqasha ibhayisekili ukugibela uzungeza umngcele womgwaqo wamatshe we-cobble (kancane kancane). Uma ungenalo ithuba lokuhlola umngcele lapho kunezitolo, izindawo zokudlela nezakhiwo ezindala, ulahlekelwe. Ukusungula okuncane kufanele kukusize ekutholeni ezinye izinto zokuhamba ngaphakathi kwesakhiwo. Abantu bendawo banomusa kakhulu kanti ama-pesos ambalwa azohamba ibanga elide. Zama okungenani ukuthola ukugibela uzungeza umngcele ukubuka inkimbinkimbi; kuzofanela lowo mzamo.
Ungaya edolobheni eliseduze leSan Juan Teotihuacan ngezindawo zokudlela, ama-ATM, noma amanye amasevisi. Yidolobha elinabantu abaningi i-5 ~ 10 imizuzu yokuhamba ngetekisi. Ungabamba itekisi kunoma yiliphi isango.
Leli sayithi linamaphiramidi amaningi amancane, kepha kunezinto ezine ezihehayo:
Ithempeli leNyanga - Iphiramidi ephakathi nendawo ephakathi nendawo phakathi nendawo.
Ithempeli Lelanga - Iphiramidi elikhulu kunawo wonke esakhiweni elinokubukwa okuhle kwezintaba ezizungezile. Bagqoka ilanga, abakubizi ngeThempeli leLanga ngeze.
IThempeli laseQuetzalcoatl - Elinye lamaThempeli angcwele kunawo wonke kule ndawo. Leli thempeli lihlotshiswe ngamakhanda wenyoka amaningi amatshe.
I-Museo Teotihuacán - Imyuziyamu epaki enezinto ezinhle kakhulu nokuzijabulisa okuncane kwaso sonke lesi siza. Kuhle ukukuhambela. Eduze kwePuerta 5.
Kukhona futhi nezinye izakhiwo ezincane ezizungeze ubunzima, ezingekho ngaphezu kwamamitha amane noma amahlanu ukuphakama. Idrayivu ezungeza umjikelezo womgwaqo, emgwaqweni osepaki uzonikeza ukumangala okuningi futhi kufanelekile ohambweni. Ukugibela noma ukugibela ama-pesos ambalwa ukuze ugibele kuzowufanele lowo mzamo.
Kukhona futhi izakhiwo eziningi ezithokozisayo eceleni kwe-Avenue of the Dead ezihamba phakathi nendawo, ngakho-ke ungavele uhambe ngethempeli uye kwelinye. Ngasohlangothini lwesobunxele lweplaza phambi kwethempeli leNyanga kunezindawo ezimbalwa kubandakanya iSigodlo samaJaguars lapho kuhlala khona imidwebo eminingi odongeni, izigcawu, namakamelo angaphansi komhlaba.
Ungaphuma kwelinye lamasango angemuva ungene edolobhaneni elisondelene neSan Juan Teotihuacán. Lapho ungathenga izinto zabathengi ezifana nokudla, amanzi, izinto zokubhaka, i-OJ entsha nokunye.
Fly ibhaluni lomoya oshisayo phezu kwemibhoshongo futhi ujabulele ubhontshisi wendabuko ngemuva kwendiza. IFlying Pictures Mexico yinkampani yesiNgisi, isebenze izindiza zamabhaluni iminyaka eminingi, futhi ayinankinga nokukhuluma nawe ngesiNgisi futhi ikunikeza insizakalo oyilindele. Zibuye ziphephe kakhulu; wonke amabhaluni abo yiCameron Balloons.
UMuzio Teotihuacán unesitolo esiseduze sezipho esiseduze nokukhethwa okuncane kwezincwadi, okokugqoka nezikhumbuzo.
Kukhona abathengisi abaningi abathengisa imikhiqizo “yesiliva” lapha; yize ngasikhathi sinye baseMexico bekholelwa ukuthi isiliva lalingabizi futhi li-izivakashi, abaningi namuhla baqoqa futhi bagqoka isiliva. Qiniseka ukuthi isiliva libhalwe ukuthi ".925" noma / futhi "Sterling" - futhi uma licwebe kakhulu lingase libe "Alpaca", elibizwa nangokuthi "Isiliva laseJalimane" futhi alinayo nhlobo isiliva. Ukubheja kwakho okuhle izitolo zemnyuziyamu kanye nezitolo zokuhloba zesiliva ezingcono Mexico City, ITaxco, njll.
Uzothola amadwala amnyama, isiliva kanye negolide sheen obsidian (ingilazi yezintaba-mlilo) nemifanekiso eqoshiwe. Abanye bazoba itshe eliyindilinga nje, noma okuthile okuningana ngokwengeziwe njengesithombe noma ikhanda. Futhi, kuzoba nabathengisi kuyo yonke indawo abaneziqhumane ze- “Aztec”, izithixo zobumba (ezinye zisatholakala namuhla), okuqoshiwe ngamatshe, njll. Lokhu ngokuvamile kuyizinto ezenziwa ubudala, kepha uma ungathola okwangempela uphula imithetho eqinile futhi uhlangabezana nenkinga nenhlawulo elukhuni evela kubaphathi esiteshini noma esikhumulweni sezindiza.
Emaphethelweni angaphakathi esiza uzothola izitolo ezimbalwa ezingathengisi nje kuphela, kodwa futhi zenze, ubuciko be-obsidian nezinye izinto zamatshe ezithengiswayo. Thenga futhi uqhathanise ikhwalithi namanani entengo ngaphambi kokuthenga. Ungathola ukukhiqizwa kwekhwalithi lapha nasezitolo zakwa-FONART edolobheni.
Kunezindawo zokudlela eziningi eduze nokuphuma kwendawo eyinkimbinkimbi, ngaphakathi nangaphandle kwepaki nasemahhotela eSan Juan Teotihuacan kanye nasezitolo zokudla nasebhikawozi. Cabanga ukukwenzela ipikiniki eyodwa futhi uyijabulele epaki.
UMuzio Teotihuacán unendawo eseduze namatholethi omphakathi kanye nemishini yokuthengisela eminingi eneziphuzo neziphuzo zokudla.
Kukhona abathengisi abancane abaningi ngaphakathi nangaphandle kwendawo ethengisa amanzi, ama-juices namasodasi. Utshwala buyatholakala ehhotela futhi abathengisi abaningana abazungeze i-perimeter (esemgwaqweni) bathengisa ubhiya obandayo. Iziphuzo zitholakala emishini yokuthengisela eduzane neMuzi.